Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Arzantina
Fanalan-jaza ao Arzantina: Mitohy ny tolona
Mediam-bahoaka17 Marsa 2021
Lalàna20 Janoary 2021
Arzatina : Raikitra indray ny fitakiana hanaovana ny fanalànjaza ho ara-dalàna, miaraka amin'ny fanantenana vao
Fanoherana20 Janoary 2021
Tantara mikasika ny Arzantina
Hevitra 09 Oktobra 2021
Hoy Dr. Dickenstein ilay mpandresy amin'ny loka l'Oreal-UNESCO ho an'ny Vehivavy ao amin'ny Siansa hoe “Zohio ny Zava-tianao fatratra”
Mediam-bahoaka 25 Jona 2021
Nanazava ny lalana nodiaviny tamin'ny fianarana matematika i Alicia Dickenstein ary mandrisika ny tovovavy sy vehivavy hafa hanao toy izany.
Honduras 14 Marsa 2021
Manome voninahitra farany ilay olomangan'ny football arzantinianina Maradona i Bangladesh
Azia Atsimo 07 Desambra 2020
Lasa olomanga tao Bangladesh ny Arzantinianina mpilalao football Maradona taorian'ny Mondialy FIFA 1986. Ankehitriny misaona amin'ny fahafatesany ny Bangladeshita.
Mirongatra ny doro tanety any Arzantina noho ny tombontsoa ara-toekarena
Mediam-bahoaka 09 Novambra 2020
"May ny firenena noho ny fihariana goavana ara-pambolena sy ny fitadiavan-tombontsoa tafahoatra amin'ny asa fanorenana. Any amin'ny toerana misy afo, androany no misy fambolena saozaha sy milina vonona amin'ny fanamboarana".
Nahazo ny lokan'ny Printsin'i Asturias tany Espaina i Quino ilay mpanao tantara an-tsary ‘Mafalda’
Eoropa Andrefana 13 Oktobra 2020
Ilay mpanao sariitatra Arzantiniana fanta-daza 81  taona no ilay lehilahy ao ambadiky ny zazavavy kely Mafalda idealista nefa mahita ny lafy ratsin-javatra.
Nanao veloma farany an'ilay namorona an'i Mafalda ireo mpanakanto manerantany
Hehy 11 Oktobra 2020
Lasa "marika manerantany maneho ny fikomiana sy ny finoana ny tontolo tsaratsara kokoa" i Mafalda, olon'ny tantara an-tsary malaza.
Costa Rica : Fampirantiana seza, afisy, jiro
Costa Rica 28 Aogositra 2020
Nosafidian'ilay fampirantiana ny hampiseho ireo zavatra ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'i Juli Capella (mpiandraikitra ao amin'ilay fampirantiana), afaka mitaky ny hampifanarahana ny fampiasàna ny fanomezana endrika (design) hifanaraka amin'ny maha-olona sy ny ara-tsosialy ireo zavatra ireo
Ny “Asado” orogoaiàna , mihoatra lavitra noho ny resaka kitonotono
Orogoay 29 Jona 2020
Tsy misy, na zara fa misy, olona mikarakara kitonotono ho an'ny tenany samirery. Io mariky ny finamànana io dia mitondra ny olona hifanatri-tava, mampifanatona ireo rehetra nifanalavitra noho ny antony maro isankarazany.
Vehivavy mijanona an-trano ao Arzantina nanao fihetsiketsehana avy eny am-baravarakely noho ny firongatry ny famonoana vehivavy
Fanoherana 05 Mey 2020
Nitombo 60 isanjato ny antso vonjy an-telefaonina hatramin'ny nanombohan'ny tsy maintsy hihobohana tamin'ny 20 Martsa.